Daawo/Akhri Khilaaf ka soo dhex shaacay Saraakiisha Ciidanka ee Tigreega iyo R/Wasaaraha Ethopia iyo Dr Aby oo kulan deg deg ah isugu yeedhay Jananada ugu Sareeya. – Xeernews24
Daawo/Akhri Khilaaf ka soo dhex shaacay Saraakiisha Ciidanka ee Tigreega iyo R/Wasaaraha Ethopia iyo Dr Aby oo kulan deg deg ah isugu yeedhay Jananada ugu Sareeya.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya ayaa sheegaya in uu dibada usoo baxay khilaafkii Raysal-wasaareha cusub iyo saraakiisha ciidanka khaas ahaan kuwa qoomiyada Tigreega.
Dr Abiye Axmed ayaa shir balaadhan isugu yeedhay dhamaan saraakiisha ciidanka oo isugu jira Janaraalo, Kornaylo iyo waliba saraakiil hoosaad aad ubadan, kuwaas oo la isugu yeedhay guriga uu taliska magaalada Addis Ababa kadagan yahay.
Kulanka saraakiisha ciidanka oo aan horaan loosii shaacinin ayaa lasheegayaa in Abiye Axmed uu kajeediyay hadal aan laga filaynin, kaas oo dibada usoo saaray khilaafkii saraakiisha Tigreega udhashay iyo Abiye Axmed kadhaxeeyay.
Raysal-wasaaraha ayaa lasheegayaa in uu saraakiisha ciidanka usheegay in uu yahay qofka kaliya ee wadanka xukuma isla markaana uu hadalkiisu soconayo, wuxuuna Abiye Axmed soo hadal qaaday amardiido ay kusameeyeen saraakiil sarsare oo qoomiyada Tigreega udhashay.
Abiye Axmed oo hadalkiisa sii watay ayaa Janaraaladii Tigreega ahaa usheegay in uu hogaanka ciidanka isbadal kusamayn doono isla markaana uu habayn doono ciidanka oo uu hada kusheegay kuwo uu musuq maasuq ragaadiyay.
Raysal-wasaaraha xukuumada Abiye Axmed ayaa sheegay in wadan burburay oo Janaraalo badan uu kafiican yahay wadan dhisan oo saraakiil yar oo tayo leh ay maamulaan, taas oo loo fasiray in Abiye Axmed uu xilkaqaadis kusamayn doono qaar kamid ah Janaraalada ciidanka ee Tigreega ah.
Dhinaca kale waxaa gabi ahaanba isbadal dhanka ciidamada ah lagu sameeyay xarunta wadanka laga maamulo ee madaxtooyada, waxaana lasheegayaa in labadalay dhamaan ciidamadii xarunta ilaalin jiray iyo waliba ilaaladii gaarka ahayd ee Raysal-wasaaraha.
Talaabadan ayaa lasheegayaa in ay qaaday haweenayda uu Abiye Axmed kubadalay taliyihiin madaxtooyada oo Tigree ahaa, taas oo muujinaysa cabsida uu Abiye Axmed kaqabo ururkii mar talada wadanka haysan jiray ee TPLF.
Is badal ku yimaad hogganka ciidanka ayaa u ah Soomaalidda deeganka fursad dahabi ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/hq720-4.jpg 386 686 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-03 12:41:392018-06-03 12:41:39Daawo/Akhri Khilaaf ka soo dhex shaacay Saraakiisha Ciidanka ee Tigreega iyo R/Wasaaraha Ethopia iyo Dr Aby oo kulan deg deg ah isugu yeedhay Jananada ugu Sareeya.
Waxaynu Dhisi Doona Cududeena Ciidamada Badda, Dr Abiy Ahmed. Wararka Degmooyinkii Gobolka Sitti ee Kililka Canfarta Sidda Sharci Daradda...